MAGRO BEHORIRIKA : hanao hetsika lehibe indray ny Sabotsy izao – MyDago.com aime Madagascar
Efa manakaiky ny datin’ny 31 Jolay izay fepotoana farany nomen’ny GIC-M hanalana ny maha kandidà azy telo mianaka. Ho an’ny movansy Ravalomanana dia efa nanao hetsika lehibe ho fanoherana izany fanapahan-kevitry ny GIC-M izany izy ireo ny faran’ny herinandro teo. Tsy hijanona hatreo anefa ny hetsika lehibe tahaka iny fa mbola hotohizana ny Sabotsy izao. Efa samy nanao fanentanana mahakasika izany avokoa ireo mpandahateny teny amin’ny Magro Behoririka tamin’ity herinandro ity.Ho avy hanatevin-daharana ny vahoaka eto an-toerana amin’io fotoanaio ireo avy any amin’ny faritra maro manerana ny Nosy. Araka ny fanazavana dia hetsika entina hanehoana amin’izao tontolo izao fa manana ny vahoaka manohana azy ny kandidà Lalao Ravalomanana. Ny Ct Brenda ohatra raha nandray fitenenana dia nanambara fa naharesy lahatra ny Malagasy rehetra ny hetsika teto amin’ny Magro tamin’ny Sabotsy satria tonga marobe ny vahoaka.Efa nekena hoy izy ny firotsahan’ny Ramatoa Lalao Ravalomanana ho kandidà dia tsy maintsy tohizana hatramin’ny farany izany dia ny fametrahana azy eny Ambohitsorohitra. Ct Manoela kosa dia nilaza fa avelao hirotsaka i Rajoelina dia ny vahoaka no hitsara. Ny hanery azy hanatanteraka ny tondrozotra no tokony ataon’ny Sadc hoy izy fa tsy hoe manala an’i Lalao Ravalomanana. Namafisiny fa i Neny na I Dada ihany no kandidàn’ny Malagasy fa tsy misy olona hafa. Ny Ct Feno dia nilaza fa noho ny antony ara-piarovana no tsy nahatongavan-dRamatoa Lalao Ravalomanana teto an-kianja.Ankoatra izay dia nilaza izy fa miandry ny filoha Ravalomanana ny fampandrosoana ny firenena ka izany no mahatonga ny fifidianana hihemotra foana. Momba ny fihetsika nataon’ny mpitandro filaminana tato ato dia nambarany fa variana ihany rehefa nahita ny mpitandro ny filaminana niresaka tamin’ny haino amanjery nilaza hoe hetsika tsy nahazoana alalana. Taiza moa hoy izy no nakana alalana fa ny kianjan’ny demokrasia izany dia samy miteny ny olona. Isika raha teny Ambohijatovo naka alalana fa tsy nahazo mihitsy, ka na haka fahazoan-dàlana 100% aza dia tsy hanome ny fanjakana.
TIM ANTANANARIVO RENIVOHITRA : HANAO HETSIKA LEHIBE
3 pensées sur “MAGRO BEHORIRIKA : hanao hetsika lehibe indray ny Sabotsy izao”
Hay ity ilay lazain-dry zalahy hoe hisy miaramila sandoka hirongo fitaovam-piadiana mahery vaika sy grenady?
Dia efa mitady ady mihitsy ry lerony izany an!
25 juillet 2013 à 7 h 18 min
Dikan’izany, ny atsasaky ny miaramila hita eraky ny tanàna, dia miaramila sandoka !
Tsy mahagaga satria ny mpitondra aza mpangalam-pahefàna !
Inona no tokony atao amin’izany miaramila sandoka izany, rahatoa ka ilay jeneraly baomba tsy mamokatra eo amin’ny lafin’ny fiarovam-bahoaka sy firenena ? Ny manenjika ny mpiaro ny ara-dalàna ihany no tena kapaokan’i lery !
Ekena ary fa hisy hetsika mahery vaika, fa Raha fotoam-pivavahana na kabary dia aleo tonga dia hajanona fa mandany ny andron’ny olona fotsiny. Tsy mba misy ve fitoriana ? na Fanaovana tsindry ara-diplomatika ? na Grevy ankapobeany ? na miaramila mpanohana ? na fidinanana an-dalambe ? mihitsy ? na lalana hafa ihany koa fa tokony ho hita hoe tena manohitra ity fanogam-panjakana nataon’ny frantsay ity ny Malagasy ? Ary koa ireo miaramila voavidiny.
Précédent Article précédent : RAVELONANOSY MAMY TIANA : Sasatry ny miarina ny FAT
Suivant Article suivant : CT HILARION RARISON : Tsy misy fifidianana eto raha tsy tonga Ravalomanana